Ohmicide Pro VST v1.10 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​အ​မည်​မ​သိး​အစ်​ကို​ခင်​ဗျာ OhmForce - Ohmicide Pro VST v1.10 software ​လေး​ကို serial number ​နဲ့​ဖြစ်​ဖြစ် keygen ​နဲ့​ဖြစ်​ဖြစ် ​ကူ​ညီ​ပေး​စေ​လို​ပါ​တယ်. ​ကျွန်​တော် studio ​လုပ်​တဲ့​နေ​ရာ​မှာ ​သွား​ပြီး​တော့ ​ဝယ်​တာ ​ကျွန်​တော့်​ကို ​ဟောက်​လွှတ်​လိုက်​လို့​ပါ. ​ကျေး​ဇူး​ပြု​ပြီး​တော့ ​ကူ​ညီ​ပေး​စေ​ချင်​ပါ​တယ်. ​ကျွန်​တော်​က studio ​နဲ့​ပတ်​သက်​ပြီး ​အ​ရမ်း​ဝါ​သ​နာ​ကြီး​လို့​ပါ. ​ဝယ်​ဖို့​ကို​လည်း ​ဘဏ်​ကဒ် ​မ​ရှိ​တော့ ​အ​ဆင်​မ​ပြေ​လို့​ပါ.
​ညီ​လေး​ရေ ​အ​မည်​မ​ထည့်​နဲ့​ဆို​လို့ ​မ​ထည့်​ပေး​လိုက်​ပါ​ဘူး. ​ငါ့​ညီ​လို​ချင်​တာ​ကို​တော့ keygen ​နဲ့ ​ရ​အောင်​ရှာ​ပြီး​ထည့်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ်. ​အောက်​မှာ Download ​လုပ်​လိုက်​ပါ. keygen, patch, crack, serial number ​စ​တဲ့ ​လေး​မျိုး​ကို ​မ​သုံး​တတ်​ရင် ​ညာ​ဖက်​အ​ခြမ်း​မှာ ​တင်​ပေး​ထား​ပါ​တယ်. video ​ဖိုင်​ကော ​အ​သံ​ဖိုင်​နဲ့​ပါ ​ရှင်း​ပြ​ထား​တဲ့​အ​တွက် ​အ​ဆင်​ပြေ​မယ်​လို့​မျှော်​လင့်​ပါ​တယ်.
​လင်း​နေ​ခ March 8, 2012 at 2:31 PM
​အ​ကို​ရော ​ကျွန်​တော် ​အဲ​ဒီ​ကောင်​ကို ​တင်​တော့ Installer Coundn't found VST Plugin ​ဆို​ပြီး Error ​တတ်​နေ​တယ်​ဗျာ.. ​ဘယ်​လို ​လုပ်​ရ​မ​လဲ ​ပြော​ပါ​ဦး
gyittoo.pwr Pwr March 22, 2012 at 10:54 PM